Izindaba - Inkomba yokuthuthuka yokuhambisa ngokuzayo.
Elihambayo ingenye main ukusebenza amathuluzi amabhizinisi zanamuhla, Logistics imishini kanye nemishini, kuyisisekelo inhlangano enengqondo ukukhiqizwa ngobuningi kanye nemishini ukugeleza inqubo. Kumabhizinisi wesithathu okuphathwa kwempahla, ukuhambisa kuyisisekelo sezinto ezibonakalayo nesobuchwepheshe sokuhlela imisebenzi yezimpahla, ekhombisa amandla okuphathwa kwebhizinisi.
I-Conveyor iyisisekelo sezinto ezisetshenziswayo. Ngokuthuthuka kanye nenqubekela phambili yokuphathwa kwezinto, imishini yokuhanjiswa kwempahla ithuthukisiwe futhi yathuthukiswa. Emkhakheni wezinsiza zokuphathwa kwempahla, imishini eminingi emisha iyaqhubeka nokuqhamuka, eyehlisa kakhulu ukusebenza kwabantu ngamandla, ithuthukise ukusebenza ngokusebenza kahle kwekhwalithi kanye nekhwalithi yesevisi, inciphise izindleko zokuhamba, idlala indima ebalulekile ekusebenzeni kwempahla, futhi ikhuthaza kakhulu ukuthuthukiswa okusheshayo kwempahla.
Ngokuzayo, umthuthi uzothuthukela ekuthuthukisweni okukhulu, enweba ububanzi bokusetshenziswa, ukuhlunga okuzenzakalelayo kwezinto ezibonakalayo, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla, ukunciphisa ukungcola nezinye izinto.
Qhubeka nokuthuthuka ngezinga elikhulu. Isilinganiso esikhulu sifaka umthamo omkhulu wokuhambisa, ubude bomshini owodwa omkhulu ne-engeli enkulu yokudlulisa. Ubude bedivayisi ehambisa umfutholuketshezi bufinyelele ngaphezu kwamakhilomitha angama-440. Ubude besithuthi esisodwa sebhande bucishe bube ngamakhilomitha ayi-15, futhi kube khona "umgwaqo wokuhambisa ibhande" owakhiwe ngamasethi amaningana ahlanganisa iPhathi A neQembu B. Amazwe amaningi ahlola isakhiwo esihamba phambili esithe xaxa sebanga elide namandla amakhulu aqhubekayo ukuhambisa izinto zokwakha.
2. Nweba ububanzi besicelo sokuhambisa. Ukuthuthukiswa kokushisa okuphezulu, izimo zokushisa eziphansi, okonakalisayo, okhipha imisebe, izinto ezivuthayo emsebenzini wezemvelo, futhi kungahambisa okushisayo, okuqhumayo, okulula ukuhlangana, okunamathelayo okuhambayo kwempahla.
3. Isakhiwo se-conveyor singahlangabezana nezidingo zokulawulwa okuzenzakalelayo kohlelo lokuphatha impahla lomshini owodwa. Isibonelo, itroli yokuthutha esetshenziswa yiposi ukuhlunga okuzenzakalelayo kwamaphasela kufanele ikwazi ukuhlangabezana nezidingo zokwenza isenzo.
4. Ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla ukonga amandla sekube yinto ebalulekile yocwaningo lwezokwelapha emkhakheni wezobuchwepheshe bezokuthutha. Ukusetshenziswa kwamandla kwe-1km ngethani lempahla kuthathwe njengenye yezinkomba ezibalulekile zokukhethwa kokuhambisa.
5. Nciphisa uthuli, umsindo kanye negesi yokukhipha eveliswa ngabathumeli abahlukahlukene ngesikhathi sokusebenza.